Farmaajo oo Koonis Stadium kaga qeyb galay munaasabada 1-da Luulyo. – Shabakadda Somalibile Media
Farmaajo oo Koonis Stadium kaga qeyb galay munaasabada 1-da Luulyo.
Maxamed C/laahi Farmaajo Madaxweynaha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta kaga qeyb galay garoonka kubada cagta Koonis Munaasabadda 59-guuraddii maalinta xornimada Koonfurta Soomaaliya iyo israacii labada gobol Waqooyi iyo Koonfur 1-da Luulyo boqolaal shacab ah.
Farmaajo oo qudbo ka jeediyey ayaa inta badan ka hadlay dadaalka xorriyada iyo midowga labada gobol, isagoo tilmaamay in dadkii xornimada dhaliyey ay ka tageen dhul udug iyo madax bannaani xoog leh helay, iyadoo caalamka ay u aqoonsadeen Soomaaliya dal madax bananaan oo awood leh.
“Adduunka sumcad iyo sharaf ayaa ku leenahay, xorniyada aan maanta heysano dad baa dadaal iyo nafba u soo bixiyey, waan awoodi karnaa in wixii inaga halaabay burburka kadib aynu mar kale dib u soo hagaagsano si adduunka magacii iyo sharafkii aan ku lahayn bari samaadkii dib ula soo laabano”, ayuu yiri Maxamed C/laahi Farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya.
Cutubyo ka tirsan qeybaha kala duwan ee ciidanka dowladda ayaa intii ay munaasabada socotay halkaas ku maray gaardis halka ciidanka Bambeyda ay muusig astaan u ah calanka ay halkaas kaga shanqariyeen taasoo shacuubta dadkii ka soo qeyb galay jirkooda dhaqaajiyey qaarkoodna dib u milicsadeen waayo samaadkii.
Sidoo kale ururada bulshada rayidka ayaa ka mid ahaa dadkii halkaas socodka ku maray waxayna kor u sideen tabeelayaal ay ku xardhanaayeen kalmado muujinaya wadaniyada, midnimada iyo dowladd wanaaga.
Ugu danbeyntii munaasabada xuska ayaa ku soo dhammaatay jawi aad u wanaagsan iyadoo dadkii ka qeyb galay ay isugu hambalyeeyeen farxada 1-da Luulyo oo ah maalin astaan qaran u ah guud ahaan Ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay adduunka kaga sugan yihiin.